दुरुपयोग हैन, युवाहरुलाई राजनीतिको जिम्मा | नयाँ शक्ति नेपाल
दुरुपयोग हैन, युवाहरुलाई राजनीतिको जिम्मा
- २५ साउन २०७५
अध्यक्ष, युवा शक्ति नेपाल
अधिकार प्राप्तिका लागि भएको पुँजीवादी राजनीतिक क्रान्तिको उपलब्धीस्वरुप गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र सहितको संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेपालको राजनीतिलाई अब नयाँ दिशातिर लैजानुपर्छ भनेर हामीले नयाँ शक्ति पार्टी बनाएका हौं । सन्दर्भ बदलिएपछि राजनीतिलाई पनि एउटा निरन्तरतामा होइन, यसलाई क्रमभङ्ग गर्न गनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । नेपालमा अहिले भएका राजनीतिक दलहरुबाट देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । पुराना पार्टीहरुको कार्यशैली अझै पनि फेरिएको छैन, ती पार्टी र पार्टीका नेताहरुको कार्यशैली र संस्कार राजतन्त्रकालीन जस्तै छ, राजाले जे गर्दथे त्यस्तै गरिरहेका छन् । अहिले पनि उनीहरुले जनतालाई प्रजाकै रुपमा हेरिराखेको अनुभुति हामीलाई हुन्छ । अर्कोतिर ती पार्टीका नेताहरुको उद्देश्य नै कमाउँ र खाउँ भन्ने मात्रै देखिन्छ, उनीहरुमा देश र जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउने भन्दा पनि आफ्नो र आसेपासेको उन्नति गर्ने मात्रै सोंच भएको देख्न सकिन्छ ।
सत्तामा भएका हुन् वा सत्ताबाहिर भएका कुनै पार्टीले पनि नेपाल र नेपालीको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन लक्ष्य राखेका छैनन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको वर्तमान सरकार पनि आफू समाजवादमा जाने भन्छ । तर, उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ । समाजवादको लक्ष्य राखेर ठीक त्यसको उल्टो दिशातर्फ यात्रा गरिरहेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारको चाला हेर्दा ‘काशी जाने कुतिको बाटो’ भनेजस्तो देखिन्छ ।
सुरुमा यो सरकारले चालेका कदमहरु ठेकेदारलाई कारबाही, यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट विरुद्ध काम हेर्दा केही गर्छ कि भन्ने थियो । तर, त्यसपछि त्यस्ता संकेतहरु देखिँदैनन् । त्यसैले अब वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता झन् बढी महसुस भएको छ । नयाँ शक्तिको औचित्य झन् पुष्टि हुँदै गएको छ ।
नयाँ शक्तिमा किन जोडिने युवा ?
मान्छेको उमेर अवस्थाको हिसाबले तीन वटा चरण हुन्छन् । आफूु र राष्ट्रको लागि केही गर्छु भन्ने अवस्था युवावस्था हो । हामीले पार्टी स्थापनादेखि नै समतामूलक समृद्धि, समावेशी समानुपातिक सहभागितामूलक लोकतन्त्र, सुशासन, स्वाधिनता मार्फत देशलाई समुन्नत समाजवादतर्फ लैजाने कुरा उठाएका छौं । हाम्रो पार्टीमा बहुप्रतिभाहरुको केन्द्रीकरण छ । हामीले उठाएको मुद्दाले नेपालको राजनीतिलाई दीर्घकालीन निकास दिन्छ । अहिलेको राजनीतिक कुसंस्कारबाट सबभन्दा बढी पीडित युवा वर्ग नै भएको छ । त्यसैले नयाँ वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता अरुलाई भन्दा ज्यादा युवाहरुलाई नै छ । त्यसैले पनि वैकल्पिक राजनीतिलाई अगाडि बढाउन युवाहरु नयाँ शक्तिमा जोडिन आवश्यक छ ।
पार्टीले युवालाई कसरी नेतृत्व दिन्छ ?
हालसालै हामीले पार्टी स्थापनाको दोस्रो वर्षको अवसरमा राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गर्‍यौं । भेलापछि हामीले ७५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । कमिटीमा हामीले ८० प्रतिशत निर्वाचित गर्ने र २० प्रतिशत मनोनित गर्ने निर्णय पनि गरेका छौं । त्यसअन्तर्गत हामीले विभिन्न खालका क्षमता र क्लस्टरलाई समावेश गर्ने हाम्रो नीति छ । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा खटिएका साथीहरुको एउटा अनुभव पनि हामीले संगठनमा केन्द्रित गरेका छौं । साथै हामीले पछिल्लो समय विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै त्यसमा अभ्यस्त युवाहरुलाई पनि नेतृत्वमा स्थापित गर्ने नीति लिएका छौं । यसरी हामीले हरेक कोणबाट समावेशी खालको संगठन निर्माण गर्ने र हरेक खालका प्रतिभाहरुको केन्द्रीकरण गर्नेछौं । हरेक क्षेत्रका युवाहरुलाई हामीले नेतृत्व प्रदान गर्नेछौं ।
युवाहरु उपभोक्ता मात्र होइनन् । दुनियाँ बदल्नका लागि विशाल उत्पादक शक्ति पनि हो । युवाहरुलाई सवल र प्रतिस्पर्धी बनाएर राज्यका हरेक अङ्गमा सार्थक सहभागितासहित आफ्ना भूमिकाहरु सुनिश्चित गर्ने आधुनिक र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने एउटा शक्तिको रुपमा हामीले विकास गर्नुपर्छ ।
विश्व युवा सूचाङ्कमा नेपालका युवाहरुलाई हेर्दा १ सय ४५ औं स्थानमा छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा नेपालका युवाहरु देखिन्छन् । हालसालै आइएलओले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालका युवाहरु २० प्रतिशत बेरोजगार छन् । विदेश पलायनको अवस्था त्यस्तै छ । वार्षिक रुपममा पाँच लाख युवाहरु विदेश जाने गरेका छन् ।
बेलायतमा १२ देखि २५ वर्ष, भारतमा १६ देखि २९ र चीनमा १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई युवा भनेको छ भने नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई युवा भनिएको छ । यो उमेर समूहका युवाहरुको संख्या नेपालमा ज्यादा छ । यो हाम्रो लागि अवसर हो । तर यसलाई उपयोग नगर्ने, युवाहरुलाई काम नदिने हो भने यो अवसर फेरि आउँदैन । त्यसैले युवा शक्ति नेपालले अब राष्ट्र निर्माणमा युवाहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै सबै युवाहरुलाई रोजगार बनाउन भूमिका खेल्छ । हामी राजनीतिक दलहरुले गरिरहेको युवाहरुको दुरुपयोगलाई रोक्छौं ।
युवालाई सचेत गराउन तालिम
पार्टीले भदौ १ गतेदेखि सातवटै प्रदेशमा क्रियाशील युवाहरुलाई राजनीति र सामाजिक चेतना दिने खालको अभिमुखीकरण तालिम दिने योजना बनाउँदैछ । राज्य संयन्त्रभित्र जुन खालको भ्रष्टाचारको जालो छ त्यसलाई तोड्नका लागि हामीले सचेतना जागरण गर्ने अभियान पहिलो चरणमा सञ्चालन गर्छौं । भ्रष्टाचारीलगायत अनैतिक कार्य गर्नेको पहिचान गरी दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्छ । युवा शक्ति नेपालले यस्ता अनियमितताको अनुसन्धान गरी कारवाहीका लागि कानुनी प्रक्रियाअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
आगामी चुनावमा जनादेश पाउँछौं
अहिले दुई तिहाइको दुवाई दिएर नेपाली जनतालाई छल्ने काम भइरहेको छ । समाजवादको लक्ष्य लिएको ‘कम्युनिष्ट’हरुको सरकारको कामले त झन् नेपालमा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ ।
नेपाली जनताले भरपर्दो विकल्प खोजेका छन् । विज्ञान, प्रविधिका क्षेत्रमा भएका पछिल्ला आविष्कारहरु र नवीनतम विचारका आधारमा राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई रक्षा गर्दै राजनीतिमा विकल्प दिन सक्ने तागत र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ लैजान सक्ने शक्ति भनेको नयाँ शक्ति पार्टी हो भन्ने कुराको विश्वास हामीले जनतालाई दिन सक्यौं भने आगामी निर्वाचनमा हामी सत्तामा पुग्छौं । हामीसँग देश बनाउने एजेन्डा, भिजन सबै कुरा छन्, अब जनतालाई यो कुरा बुझाउनु आवश्यक छ ।
युवा दुरुपयोगको अन्त्य
पुराना पार्टीहरुले युवालाई दुरुपयोग गरेका छन् । पुराना पार्टीहरुले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि युवालाई प्रयोग गरे । निर्वाचनको समयमा मासु र रक्सीमा युवा परिचालन गर्ने र निर्वाचन जितेर गइसकेपछि तिनै युवालाई नचिन्ने अवस्था छ । यस्तो युवा शक्तिको दुरुपयोगलाई रोक्न जरुरी छ ।
हामीले देखिरहेका छौं समाजमा हतियार लिएर हिँड्ने युवाहरुलाई छाडा छोडिएको छ । विकृति र विसङ्गतिमा लिप्त भएका पेसेवर मान्छेहरुलाई छोडिएको छ । हिजो माओवादीले एके४७ बोक्यो हामीले पेस्तोल बोक्न नपाउने ? भन्ने दिशातर्फ समाज गइरहेको छ । राज्यले छाडा छोडिदिएकाले दैनिक लुटपाट, हत्या र बलात्कारको घटना भइरहेको छ । यस्ता अपराध गर्ने व्यक्तिहरुलाई केही राजनीतिक दलहरुले संरक्षण गरिराखेका छन् ।
नयाँ शक्ति पार्टीले युवाहरुलाई ‘युज एन्ड थ्रो’ होइन निरन्तर रुपमा सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेको छ । युवाहरुलाई सीप, क्षमता, दक्षता अभिवृद्धि गर्दै देश विकासमा लगाउने हाम्रो नीति हो । युवालाई नीति निर्माण र निर्णय तहमा सहभागी गराउन सक्नुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा छ । नयाँ शक्ति पार्टीको युवा संगठन युवा शक्ति नेपाल युवाहरुलाई देश निर्माणमा लाग्न आह्वान गर्दछ । हामीलाई विश्वास छ, हामी युवाहरुको दुरुपयोगलाई रोक्छौं र कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउने भर्‍याङ हुने हैन कि राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिने युवा नेतृत्व विकास गर्ने गरी हामीले काम गर्छौं ।
हामीलाई विश्वास छ हामी अहिलेको विकृत राजनीतिको विकल्प दिन सक्षम हुनेछौं ।